Kubonakala sengathi u-Anastasia Volochkova ubeke umgomo wokubhubhisa bonke "abathandayo" futhi "abaphatha kabi", bebiza i-ballerina ukuba ibe nesizotha. Amawele amaningi, ukuhlobisa i-Volochkova's instagram, awazange abangele izingxoxo ezinjalo zesiphepho isikhathi eside, njengoba kwakunonyaka odlule. Yini enye yokuheha, ukuba i-heroine yezindaba zakamuva kumaphephandaba, futhi kubangele ukukhwabanisa ku-microblogging yakho? Yiqiniso, izithombe zisesitayela se-nude. Akuyona okokuqala ukuthi izithombe ezingcolile zika-Anastasia Volochkova zishaye i-intanethi.
Izolo, ngo-September 1, u-Anastasia Volochkova uqedile ukuvakasha kwakhe esifundeni saseSverdlovsk. Esikhundleni sokubonisa ezithombeni zakhe ezingu-Instagram kusukela enkundleni yesikole yentombazane yakhe ethandekayo u-Ariadne, lowo owayengumkhulu we-Bolshoi Theatre wabe esithumele i-photoset ngemifudlana ye-fir ebhodini. Ngesikhathi esifanayo ibhola le-ballerina laphinde lahluleka ukuvusa ingxoxo enesivunguvungu ngesondo lakhe, elenza kahle emgqonyeni omkhulu wokhuni.
"I-rancor" enobungozi ngokushesha yacabanga ukuthi ngale ndlela inkanyezi ikhangisa ikhambi eliyingqayizivele lama-hemorrhoids. Abanye abahlukumezi baqhathanisa izinkampani ze-coniferous ezungeze uVolochkova negquma elingcwabeni.
Ephendula, "izifiso ezimbi" u-Anastasia Volochkova ubonise ngemuva
Amazwana ngaphansi kwezithombe kusukela ebhodini, ngokusobala, wamshaya umculi. Ushaywe ngengozi yababhalisile ku-Instagram yakhe, u-Anastasia Volochkova wanikezela ngomshini oshaywe ngobuciko ngoLwesibili ebusuku. Umculi ohlonishwayo waseRussia, Umculi Wabantu WeKarachaevo-Cherkessia, kanye neNorth Ossetia-Alania iphendule ngokuhlukumeza kubo bonke "ababi" ngokuthumela isithombe esibonisa ngokucacile ukuthi uhamba nge-naked, sorry, imbongolo yenkanyezi.
Ukudubula kwebhola le-ballerina elidumile lathi kanje:
Ngabe ngithandwa kakhulu, ngatshelwa ukuthi isithombe sami, lapho ngase ngivele ezindlebeni zami emifudlaneni yamafriji (ukuze ngingamhloni abanye), kubangele ukuqhuma futhi wabiza lesi sihloko ingcwaba? Ngithengile le mibhoshongo ye-fir-birch cishe izingcezu ezingu-40 ku-Urals! Ngakho nansi isithombe ngaphandle kwemifula. Ngicabanga ukuthi abaningi manje sebezofa ngenxa yentukuthelo babuze imifula ukuba ibuyele emuva. Burn, othandekayo wami! Futhi ngizokuphumula. Yeka indlela okumnandi ngayo ukujabula futhi othandekayo. Ngithethelele okungenani lezi zici ezimbili.
Ewebhu kwakukhona isithombe sika-Alla Pugacheva ngaphandle kokwenza
"Ukudansa" nge-TNT inkathi 3 - kuyini imfihlo yokuthandwa kombukiso
UPetr Kislov wakhuluma ngokuhlukana no-Anastasia Makeeva noPolina Gagarina
Yini efihlekile endlini-2 kusukela kwamakhamera: U-Olesya Lisovskaya utshele iqiniso mayelana nombukiso
U-Yevgeny Mironov uphazamise ukudubula ngenxa yesifo esibi kakhulu
Izindiza ziphukile ezinyaweni zazo
U-Yegor Konchalovsky wakhuluma ngesimo sikadadewabo kaMashi
I-Souvenir "Imbuzi" Yonyaka Omusha kusuka kubumba lwe-polymeri: kanjani yokwenza umkhumbulo weNyaka Omusha ka-2015
Prince William no Kate: The Wedding
Ngokushesha ulahlekelwe isisindo ngaphambi kokuqala kwentwasahlobo
Indlela yokufunda ukujabulela ubulili
Ukuqeda amaqanda agcwele ama-caviar
Owesifazane u-Aquarius no-Aquarius Owesifazane: Ukuhambisana
I-sauce yokupaka okuyisikhombisa